Indlu entle ePeruíbe! Iimitha ezingama-20 ukusuka elunxwemeni! - I-Airbnb
Indlu entle ePeruíbe! Iimitha ezingama-20 ukusuka elunxwemeni!
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguKeith Nara
Indlu etofotofo kakhulu kwindawo eselumelwaneni yasePeruíbe, enemarike, iindawo zokubhaka, p. ibhasi kwaye ikhuselekile kakhulu phambi kwekhondom ene-concierge yeeyure ezingama-24 kwaye ikhuselwe yinkampani yokhuseleko yasekhaya.
House uye ifayibha Wi-Fi, ngeli xesha lokuba iintsapho kwi-ofisi ekhaya, isithuba ukonwabela echibini, emsebenzini kunye nabantwana abo olu lwimi kwi-intanethi yaye ufikelwa ukuba bakhululeke, endaweni nosihlalo yolwabiwo lounge ezintle, kwiindawo wavula isango, bona unxweme
Le Ndlu ineprojekthi yolwakhiwo lwangoku kunye noluzinzileyo olunobuninzi bokukhanya kwendalo, nto leyo enika indlu umbono wokudibanisa okungaphezulu kunye nokusingqongileyo kunye nokuziva usempilweni namandla.
Yethu ifanitshala isimbo, ifeni, izixhobo kunye nezinye izinto zibonisa ukuba zonke iinkcukacha yenziwe ngononophelo olukhulu ukuze intsapho yethu ukuze ube indawo emnandi kunye iphupha lam libe yinyaniso yokuba indlu elunxwemeni, siyayithanda uhombiso nobugcisa, iinkcukacha ezininzi adalwe umntakwethu, uPeter Paiva kubandakanya iziqwenga ezizodwa ekuhombiseni kwazo ezenziwe nguye.
Okokugqibela, ukuba ujonge ukuchitha ixesha elimnandi kufutshane nolwandle, ummandla ozolileyo kwaye uchithe iintsuku ezimnandi kunye nosapho, uya kuyithanda indawo yethu apho igama elithi "IGRATITUDE" ngokuba nalo.
Indlu etofotofo kakhulu kwindawo ebalaseleyo yanamhlanje yasePeruíbe, enesakhiwo seemarike, iindawo zokubhaka, indawo yokumisa ibhasi, iindawo ezinomtsalane zembali ezinje ngamabhodlo e-Abarebebê, ikhuseleke kakhulu phambi kwekhondom ene-concierge yeeyure ezingama-24 kwaye ikhuselwe yinkampani yokhuseleko yasekhaya. .
Indlu inee-hammocks zokonwaba namaxesha okuphumla, iqula lokuqubha, indawo yokuphumla elangeni kwaye ikumgama nje weemitha ezingama-20 ukusuka kunxweme olunesanti.
Ihlalisa iintsapho kunye namaqela abahlobo kakuhle. Sineendawo zeemoto ezi-2 (ezi-2 ngaphakathi kunye ne-3 ngaphandle), i-barbecue, i-oven ye-pizza kunye nommandla omkhulu wangaphandle.
andiboneleli ngelinen yokulala.
Akuvumelekanga ukufumana iindwendwe, kuphela inani leendwendwe eziboniswe kwiwebhusayithi, amaqela awavumelekanga.
Ndicela amagama phambi kokuba ndingene kwinkomfa.
Naziphi na izinto ezaphukileyo kunye nezixhobo ziya kuhlawuliswa, kubandakanywa iiglasi, iipleyiti kunye nempahla yasekhitshini ngokubanzi.
Akuvumelekanga ukungena equleni nayo nantoni na ebukhali. Musa ukusebenzisa iiglasi kwindawo yedama.
Gcina iisofa kunye neebhedi zicocekile njengoko zifunyenwe.
4.82 · Izimvo eziyi-66
Ubumelwane obuzolileyo, isixeko esibalaseleyo kuNxweme oluMazantsi ngolungelelwaniso lwaso, ucoceko kunye neendawo ezininzi zorhwebo ezihlangabezana neemfuno.
Kufuphi nendlu sineebhaka, ipizzeria kunye neevenkile zegrosari, kufutshane nesikhululo sebhasi.
Kwisixeko sasePeruíbe, kukho iingxangxasi ezikufutshane kunye neendlela, kumbindi wedolophu kukho umboniso wobugcisa, ipaki enezinto zokudlala kunye nezitendi ezininzi ezimnandi.
Embindini sinesikhululo sebhasi sesixeko esihamba ngamaxesha ahlukeneyo imini yonke. Sinokhenketho kwisixeko, iLama Negra kwiZiko lokufumana, iingxangxasi kunye neelwandle zaseGuaraú kulabo abathanda ukuhlola isixeko kunye nokuphuma baya kuyithanda.
Umbuki zindwendwe ngu- Keith Nara
Unokuqhagamshelana nathi ngefowuni nangaliphi na ixesha ngexesha lokuhlala kwakho, ukubuza nayiphi na imibuzo okanye ulwazi olungakumbi onokulufuna.
Kukho umgcini oza kuncedisa ngayo nayiphi na into efunekayo kwaye uya kuhambisa izitshixo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Estância Bal Maria H Novaes